May 2021 – Nyi Ma Lay
ဖုန်း ရေစိုတယ်ဆိုတာ ဖုန်းနဲ့မကင်းသူတိုင်း ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ မ တော်တဆ ရေထဲကို ပြုတ်ကျတဲ့အလေ့အထကို အားလုံးနီးပါး ကြုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ တ ခါလေ အပြင်ထွက်ရာ ထီးမပါလို့ မိုးရေစိုတာတွေ၊ မိုးရေစင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ဖုန်းကို ထားမိတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ် […]
အမေရိကန် ဒေါ်လာကို ငွေကြေး စံအဖြစ် ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ ၊ မက္ကဆီကို နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် သုံးစွဲလျှက် ရှိကြသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ နှင့် ၎င်းငွေ၏ သငေ်္ကတဖြစ် သည့် “ $ […]
မိကျောင်းဟာေ ရချိုေ ရငန်စပ်တဲ့ေ ရပြင်မှာတော့ ဘုရင်ပါ။ အဲဒီနေရာ မျိုးမှာ သူ့ကိုယှဉ်နိုင်တဲ့သားရဲ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုရေဘုရင်က ရေနစ်သေစရာလား??? ဟုတ်ပါတယ်။ မိကျောင်းတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မျိုးပြုတ်မတတ် ရေနစ်သေခဲ့ကြဖူးတယ်။ National geographic channel မှာပြဖူးခဲ့တဲ့ […]
By Nyi Ma LayPosted on May 13, 2021
VPN free ပေါင်း သော င်းခြောက်ထော င်လည်း သုံးနေကြပြီမို့ အခု ပြောချ င်တာက VPN နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားရ မှာကိုပြောမှာပါ။ Credit/Debit card payment တွေလုပ်စရာ ရှိရင် […]
ကမ္ဘာ တစ် ဝှမ်းတွင် လူသိများြ ပီးပြုလုပ်လေ့ ရှိတဲ့ မင်္ဂလာေ ဆာင် ရိုးရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကေ တာ့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးဟာ ပန်းစည်း ကို နောက်က လူပျို အပျိုတွေထဲ ပစ်ထည့် […]
သင်ရွေးချ ယ်လို က်တဲ့ ပုံလေးက တစ်ဆင့် သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ် ထားကို ခန့်မှန်းကြည့်မယ် (၁) တံခါးကို အတင်းတွန်းဖွင့်ပြီး အတွင်းထဲဝ င်ဖို့ ကြိုးစားမယ် သင်ဟာ စိတ်ဓာ တ်မာကြောပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါ လုပ်တတ်တဲ့စိတ် ရှိပါတယ်။ […]
Dilara IIter အမည် ရှိတဲ့ Turkey နိုင်ငံ ၊ Istanbul မြို့မှာနေထိုင် လျက်ရှိတဲ့ မိန်းကလေး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ 2017 ခုနှစ် ကတည်းက သူမရဲ့ twitter စာမျက်နှာေ ပါ်မှာ […]
ရှေးလူကြီးတွေကတော့ စာတစ်လုံး ဘုရားတစ်ဆူလို့ ပြောခဲ့ကြတာ…အရင်ကတော့ ကိုယ်လည်း နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒီ Post လေးတွေ့လိုက်တော့မှ… အော်…ဒါကိုပြောတာလား ဆိုပီး နားလည်လာတော့တယ်…ထပ်ဆင့် မျှဝေကုသိုလ်ပြုလိုက်ပါတယ်… 🙏 နမောဗုဒ္ဓဿ 🙏 ” အက္ခရာဘုရားရှိခိုး ” 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 […]
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေတုန်း မှာ ရုတ်တရက် သိမ့်ခနဲ တုန်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း
အိပ်နေစ ဉ်အ တွင်း အမြင့်တစ်ခု ခုပေါ်ကပြုတ်ကျ သလို၊ ချော်လဲ သလိုမျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဆ တ်ခနဲတုန်တ က်လာရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ကျွန်တော် တို့အားလုံး ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေခဏ၊ ခဏဖြစ်တာ ဘာကြောင့် လဲဆိုတဲ့အဖြေကို ဒီဆောင်းပါးေ […]
သိမှတ်ဖွယ်ရာ မြန်မာစကားပုံ (၁၀၀)….မပါသေးတာ ထပ်ပြောခဲ့အုံးနော်
‘ မြန်မာစကားပုံ (၁၀၀) မပါသေးတာ ထပ်ပြောခဲ့အုံးနော် 1. A wonder lasts nine days. ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက် ကဲ့ရဲ့ ခုနှစ်ရက် ။ 2. Out of the frying […]